သယံဇာတရောင်းရငွေ သန်းထောင်ချီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ သိပ်ကံဆိုးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံ - Zet Star
သယံဇာတရောင်းရငွေ သန်းထောင်ချီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ သိပ်ကံဆိုးလွန်းတဲ့ နိုင်ငံ
September 7, 2020 September 7, 2020 ZCC News	0 Comments
ရခိုင်မှာထွက်ရှိတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုရောင်းဖို့ ၂၀၀၈-ခုနှစ်မှ ာတရုတ်နဲ့နှစ်၃၀စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဟာ(၂ – ၆-၂၀၁၃)မှာပြီးလို့ (၂၁ – ၁၀-၂၀၁၃)မှာစတင်ပို့လွှတ်ခဲ့တယ် ။ တစ်နှစ်မှာသဘာဝဓာတ်ငွေ့(၁၂)ဘီလီယံကုဗပေအထိပေးပို့နိုင်တယ်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိဓာတ်ငွေ့သိုက်မှထွက်ရှိတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေသန်း၁၀၀ကို မြန်မာအတွက်တရုတ်ကပြန်ရောင်းပေးလို့ ကျောက်ဖြူ၊ /ကျောက်ဆည်/တောင်သာမြို့မှာ စက်ရုံသုံးရုံတည်ဆောက်ပြီးလျှပ်စစ်ထုတ်ယူတယ်။ (UMEHL/MECအောက်ရှိစက်ရုံများနဲ့တပ်များကိုအဓိကပို့ပေးတယ်)
ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့်အတူတည်ဆောက်တဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းဟာ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပြီး (၂ – ၅ -၂၀၁၇)မှာစတင်ပို့လွှတ်ခဲ့တယ်။ တနှစ်မှာရေနံတန်ချိန်၁၃.၆သန်းခန့်ပို့ပေးတယ်..။ ကျောက်ဖြူရေနံပိုက်လိုင်းနှင့်ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂)ဘီလျံခန့်ရရှိတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချပေးမယ့် Essar Group A2နဲ့Lလုပ်ကွက်တွေမှထွက်တဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၁၃ ထရီလီယံကတော့ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုမပြီးစီးသေးလို့ ထုတ်ယူခြင်းမပြုသေးတာဖြစ်တယ်…။ ၁၉၉၈/၂၀၀၀မှစတင်လို့ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ ရှိရတနာ၊ရဲတံခွန်လုပ်ကွက်မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းတာ တစ်နှစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂ဘီလျံနီးပါးရရှိတယ်။
၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍နေ့စဉ် ဇောတိကလုပ်ကွက်အသစ် M-9မှ ဓာတ်ငွေ့ သန်း၃၀၀ကိုထုတ်ယူတယ်.။ လက်ရှိကာလမှာ ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက်ပေါင်း( ၆၅)ခု၊ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် (၅၃)ခုရှိသလို လုပ်ကွက်အသစ် (၁၈)ခုမှာလည်း စမ်းသပ်ရှာဖွေတူးဖော်မှုများပြုလုပ်နေတယ်.။ ဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေများဒေါ်လာသန်းထောင်ချီ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။
ကြေးနီ၊ ရွှေ၊ ကျောက်စိမ်း၊ ခနောက်စိမ်း၊ ရှားပါးဓာတ်သတ္တု (Rare Earth)ကျွန်းသစ်စတဲ့ သယံဇာတများကို ဘယ်လိုအသုံးချသလဲ…? ပမာဏများပြားတဲ့ဒီငွေတွေ ဘယ်နေရာကိုဘယ်ခြေထောက်နဲ့ထွက်သွားသလဲ? (သေချာတာတော့နိင်ငံတော်ဘဏ္ဍာထဲမရောက်ပါ) မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE)ကို တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ဦးပိုင်(UMEHL)နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း(MEC)တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းချူ ပ်ထားပါတယ်.။ ဦးပိုင်(UMEHL)နှင့်MEC လုပ်ငန်းစုများကို တပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်နဲ့စစ်ထောက်ချုပ်တို့က ထိန်းချူ ပ်ထားပါတယ်..။ (သူ့ရဲ့အထက်မှာကာချုပ်ရှိပါတယ်)
လုပ်ကွက်တစ်ခုကိုအသုံးချရုံမျှနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးလျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်သလို မီတာခကိုစျေးနှုန်းချိူ သာစွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်… ပြည်သူလူထုအများစုမှာကောင်းကျိုးမခံစားရပါ ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများကြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာယိုပေါက်ကိုဖာထေးပြီး သူခိုးကြီးများလက်မှပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများကို ပြည်သူတွေရရှိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…။
မြန်မာ့သယံဇာတတွေဟာအများအတွက် မဖြစ်ပဲလူယုတ်မာတစ်စုအတွက်သာဖြစ်နေတာကို သတိပညာဖြင့်ကြည့်ပါကမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်…။ သိပ်ကံဆိုးတဲ့အမိမြေမှာ သစ္စာပန်းများ ပွင့်လန်းနိုင်ပါစေ
← ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းမှာ ဝမ်းရေးအတွက် ခက်ခဲလွန်းနေတဲ့ မသန်စွမ်းလေး ဖိုးတာ
‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကော့မှူးအောင်လံတော်ခရီးစဥ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ →